Shina: Cybercafé 130.000 No Nakatony Tao Anatin’ny Enina Taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2011 14:52 GMT
Araka ny “tatitra Tsenan'ny Cybercafé Shina taona 2010″ navoakan'ny Ministeran'ny Kolotsaina tamin'ny 17 Martsa 2010, maherin'ny 130.000 ireo cybercafé tsy ara-dalàna nakatona tao anatin'ny 6 taona.
Ankoatra ny fanakatonana ireo cybercafé tsy ara-dalàna dia nampiditra fandrindràna vaovao ihany koa ny governemanta ka nametraka sazy henjana mba hanilihana ireo cybercafé madinika tsy ho ao anatin'ny fandraharahana mba hahafahana manome toerana malalaka an'ireo andianà cybercafé goavana.
Vokatr'io fanovàna mahery vaikan'ny tsena io, nitotongana ny hadirin'ny tsenan'ny aterineto ka avy any amin'ny 12.96%, RMB88.6 lavitrisa tamin'ny 2009 tonga any amin'ny RMB 77.12 lavitrisa tamin'ny 2010, fitotonganana maherin'ny RMB10 lavitrisa raha resaka tamberim-bidy.
Ny fitambaram-ben'ny cybercafé tamin'ny taona 2010 dia 144.000 nahitàna solosaina 14.28 tapitrisa. 30% tamin'ireo cybercafé no miasa eo ambanin'ny fanomezana tombon-dahiny manokana. (avy amin'ny people.com [zh]) Ny fampiroboroboana ny fanomezana tombon-dahiny manokana dia ho fanamorana ny fametrahana ny fandraketana ny tena anarana eny amin'ireo cybercafé: angatahana hilaza ny mikasika azy ny mpanjifa alohan'ny hahatafidirany amin'ny aterineto (ID information). Fanampin'izany, ny tsy ampy taona dia voarara tsy hiditra cybercafé.
Ny taona 2011, ny ministera dia milaza ny hanitatra ny fanakatonana cybercafé tsy ara-dalàna teny an-tanàn-dehibe ho hatrany amin'ny faritra ambanivohitra.
Fanazavana bebe kokoa ao amin'ny RFA.